Golaha Amaanka oo xayiraaad 13 sano socotay ka qaaday gudoomiyihii Shirkaddii Barakaat – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Amaanka oo xayiraaad 13 sano socotay ka qaaday gudoomiyihii Shirkaddii Barakaat
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyihii shirkaddii Barakaat Axmed-Nuur Cali Jimcaale ayaa sheegay in Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay uu ka qaaday xayiraad xaga hanitada ee socdaalka oo saarneyd muddo 13 sano ah.
Ganacsade Axmed-nuur oo warysi siiyey BBC isagoo ku sugan Muqdisho ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in laga qaado xayiraadaas saarneyd muddo 13 sano ah, wuxuuna u mahad celiyay dhinacyadii ka qeyb qaatay dadaalka looga saarayay liiska waxa loogu yeeray argagixisada, taasoo aheyd sababta xayiraadda loo saaray isaga iyo shirkadiisii Barkaat.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dib u helo xoriyadeydii dhinaca socdaalka iyo maaliyada, dhibaato badan ayaa iga soo gaartay xayiraadaasi saarneyd muddo 13 sano ah” ayuu yiri ganacsade Axmed-nuur Cali Jimcaale.
Ganacsadahan ayaa u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geystay sidii sidii looga qaadi lahaa xayiraadda iyo dadkii xooluhu ka xayirnaayeen samirka muujiyey mudadadas dheer “Waxaan u mahadcelinayaa cid kasta ee gacan ka geysatay in xayiraadda la iga qaado, sidoo kale, waxaan u mahadcelinayaa dadkii hantida ka xanibneyd ee sabarka muujiyay markii shirkada Al-Barakaat la xanibay” ayuu yiri Axmed Nuur Jimcaale.
Wuxuu sheegay Axmed-nuur in dadkii lacaguhu uga xayirnaayeen shirkaddii Barakaat ay heli doonaan lacagtooda “Inshaa Allaah, dadkii lacaguhu ugu xanibnaayeen wey heli doonaan” ayuu sidoo kale yiri Ganacsade Jimcaale.
Shirkadii Barakaat oo aheyd shirkadii ugu weyneyd Soomaaliya ee xawaaladaha iyo isgaarsiinta ayaa la xanibay markii uu dhacay weerarkii 11 September 2001 kadib markii lagu eedeeyay in ay taageero dhaqaale siiso Ururka Al-qaacida.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa 11-kii bishan ka qaaday xayiraadaas socotay muddo 13 sano ah, kadib dhowr jeer oo Golaha Amaanku kulamo ka yeeshay arrinta shirkadaas iyo gudoomiyaheeda Axmed-nuur Cali Jimcaale.
← Somaliland oo sheegtay in Marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec lagu aasayo Berbera → UN, AU to boost Somali National Army